SSM : “Tokony hampifanarahana ny karaman’ny tsy miankina sy ny an’ny fanjakana”
Ezaka govana vitan’ny Filoham-pirenena, Andry Rajoelina ny fampiakarana ny karama farany ambany ho 200 000 ariary. 10 septembre 2019
Ny sehatra tsy miankina ihany anefa no tena voakasik’io. Manoloana izany dia nilaza ny firaisan-kinan’ny sendika eto Madagasikara (SSM) fa raha toa ka nampiakarina ny an’ny tsy miankina dia tokony hojerena manokana ihany koa ny an’ny mpiasam-panjakana mikarama ambany dia ambany.
Voakasik’io, hoy izy ireo, ny an’ny mpampianatra sy ny an’ireo mpiasam-panjakana hafa. Nanazava ny sekretera jeneralin’ny SSM fa raha nampiakarina ny karaman’ny tany amin’ny sehatra tsy miankina dia tokony hampitoviana an’izay ihany koa ny eo anivon’ny asam-panjakana. Mitovy ihany ny filan’ny mpiasam-panjakana sy ny filan’ny mpiasa tsy miankina, hoy izy, ka tokony hampifandanjana sy ampitovitoviana ny karama. Raha miakatra ny tsy miankina dia tokony hanaraka izay ihany koa ny an’ny fanjakana.
“Efa iaraha-mahalala ny fahasarotan’ny fiainana amin’izao fotoana izao. Ireo mpiasa mikarama ambany dia ambany dia mahatsapa fa na ny saran-dalana ivezivezena aza tsy ampy akory raha iny 200 000 ariary iny no raisina isam-bolana amin’izao vaninandro izao”, hoy koa ny fanazavany. Eo amin’izay sehatry ny asam-panjakana izay hatrany dia nambarany ihany koa fa tara ny fikarakarana ny antontan-taratasy sasany satria maro be ireo mpiasam-panjakana mitana andraikitra ambony no tsy mahafehy akory ny asa ampiandraiketina azy ireny.
Nasiany teny ihany koa ny mahakasika ny fisotroandrononon’ny mpiasam-panjakana. Misy tsy mifanaraka amin’ny didy aman-dalàna misy, hoy izy, ny sasany amin’ny fitantanana ny fisotroandrononon’ny mpiasam-panjakana ka tokony hojerena akaiky.
Zotra amina lalam-pirenena miisa fito no niverina amin’ny laoniny FITATERANA AN-TANETY (231) 16 septembre 2020 Vazaha iray voatifitra, voaroba ny vola tamina kitapo NIREFOTRA NY BASY TANY TOLIARA (190) 16 septembre 2020 Lehilahy tra-tehaky ny Polisy teo am-pandrobana fiara ANTSAHAMANITRA (129) 16 septembre 2020 Iray volana vao hita ilay zazavavy varira 12 taona FAKANA AN-KERINY (121) 18 septembre 2020 Rarahan’ny jiolahy fampatoriana ny sakafon’ireo olona horobaina SAMBAVA (120) 18 septembre 2020 Olona marary saina nianika “pylone” nitondra herinaratra ANOSIZATO (115) 16 septembre 2020